कोरोना संक्रमणको नयाँ रुप, स्वास्थ्यकर्मीसमेत चकित, आमा बुवा नेगेटिभ, बच्चामा पोजेटिभ – News Np Online
मुख्य पृष्ठ /News/कोरोना संक्रमणको नयाँ रुप, स्वास्थ्यकर्मीसमेत चकित, आमा बुवा नेगेटिभ, बच्चामा पोजेटिभ
कोरोना भाइरसको कहर लगातार जारी छ। यो माहामारीले विश्वलाई नै आफ्नो चपेटामा लिएको छ। दैनिक कोरोना संक्रमित बढिरहेका छन्। यसैबीच एउटा विचित्रको समाचार सार्वजनिक भएको छ। जसले चिकित्सा क्षेत्रमा मानिसलाई समेत अचम्मित बनाएको छ।
अमेरिकाका येल स्लुक अफ मेडिसिनका शोधकर्ताहरुका अनुसार गर्भनालबाट कोरोना संक्रमण फैलिएका केश आइसकेका छन्। शोधकर्ताहरुका अनुसार नवजात शिशुमा कोरोना संक्रमण त्यतिबेला हुन्छ, जतिबेला डेलिभरीपछि उनीहरु कुनै संक्रमितको सम्पर्कमा आउँछन्। त्यो बाहेक कोरोनाबाट संक्रमित आमाको कोखबाट गर्भनालमार्फत नवजात शिशुसम्म कोरोना संक्रमित हुनसक्छ। dcnepal
त्यसपछि मलाई पछाडीबाट उसले स’मात्यो कपडा खोल्यो र …….सुरु गर्य ! मेरो त श्रीमान पनि विदेश हुनुहुन्छ अब म के गर्ने होला ? (भिडियो सहित)
स्कारपियो र मोटरसाइकल एकापसमा ठोक्किदा मोटरसाइकलमा सवार सन्तोष र ६ वर्षीय सुनिलको मृ,त्यु